Ireo mpitantsoratry ny vatohara dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra amin'ny tsy fisian'ny fahalalana tonga lafatra; Ny haran-dranomasina dia rafitra sarotra sy mihetsiketsika ary ny fepetra takiana amin'ny ho avy dia tsy azo antoka loatra. Vokatr'izany, ny mpitantana dia tsy mahagaga loatra ny fiantraikan'ny fanapahan-kevitry ny fitantanana. Na dia mety hitarika ho amin'ny tsy fandriam-pahalemana aza izany indraindray, raha ny marina dia tsy mandray fanapahan-kevitra ihany koa ny 'fanapahan-kevitra' - na dia iray aza - izay mety ho vokany manan-danja sy tsy azo antoka. Ny fanamby amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fahalalana tsy manam-pahaizana dia nahatonga ny foto-kevitry ny fitantanana fitantanana, izay ahitana fanaraha-maso toy ny singa fototra.
Adaptive Management Cycle, natao tamin'ny CSIRO Marine sy ny Atmosferic Research.
Ny fitantanana manaitaitra dia manaiky fa ny hetsika fitantanana dia mamorona fahafahana hianatra sy hanatsara. Ny famantaram-pitantanana ny fitantanana dia rafitra iray sy maharitra ary manome fototra ho an'ny fanapahan-kevitra matotra amin'ny fiatrehana ny tsy fahazoana antoka amin'ny alalan'ny fampiasana fanaraha-maso sy fanabeazana. Ny fomba fitantanana an-tserasera dia manome fomba iray ho an'ny:
Mamolavola fanapahan-kevitra misimisy kokoa mikasika ny asa izay no tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fiarovana
Famahana sy fanandramana ny fahombiazan'ny paikady nampiasaina
Mianatra sy mampifanaraka amin'ny fanatsarana paikady
Ny fitantanana fitantanana no manatsara ny fitantanana maharitra eo amin'ny fitantanana, saingy zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny olana maika mba hahitana ny fifandanjana marina eo amin'ny fahazoana fahalalana amin'ny fanatsarana ny fitantanana amin'ny ho avy sy ny fitantanana ny vokatra tsara indrindra eo amin'ny fahalalana ankehitriny.
Ny mpandraharaha liana amin'ny fampiharana fomba fitantanana fitantanana ara-drafitra dia hahita karazana fitsapana maromaro, ao anatin'izany ny torolàlana manokana ho an'ny mpitsabo. ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAdaptive Management: fitaovana ho an'ny mpikaroka momba ny fiarovanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUSGS - Fampisehoana video momba ny fitantanana an-tserasera